ကျောက်ဖြူ စီမံကိန်း နှင့် ပါတ်သက်ပြီး အစိုးရ အဖွဲ့အတွင်း သဘောကွဲလွဲမှုများ ရှိလာနေ - Eureka Myanmar | Myanmar news, headlines, top stories , culture and entertainment.
ဇိကုပ်ပြီး နတ်ပြည်တင်ရတော့မည့် မြန်မာ့စီးပွားရေး
မြန်မာ့စီးပွားရေးတက်သလား၊ ကျသလား ဆိုသောမေးခွန်းသည် ယခုနှစ်တွင်း အကြားရဆုံး မေးခွန်းဖြစ်ပြီး ယခုတလော အကြားရ ပိုစိတ်လာသည်။ စီးပွားတက်သ...
Byခင်မို့မို့လွင် သီတင်းကျွတ် ရုံးပိတ်ရက်များ ပြီးဆုံးပြီးနောက် ပထမဆုံး ရုံးတက်ရက် အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက်၌ ဖြစ်၏။ သတင်းထောက်များက နာမည...
ကန်ဒေါ်လာသန်း ၅ဝကျော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည့် ရန်ကုန်၊ မန္တလေးတွင် ကုန်တွင်းဆိပ်ကမ်းများဖွင့်လှစ်
ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၁ - ကန် ဒေါ်လာသန်း ၅၀ ကျော်ရင်းနှီး မြှုပ်နှံထား သည့် ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်းများ ကို ဖွင့်လှစ်လိုက်ြ...
ဝါဒဖြန့်မှု၊ လေလုံးထွားမှုနှင့် ငြင်းပယ်မှု
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နှစ်ပေါင်း ၅ဝ ကျော်အောင် ကြမ်းလွန်းလှသည့် ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုများ၊ အစိုးရဝါဒဖြန့်မှုများနှင့် ရင်းနှီး နေထိုင်လာခဲ့ရမှု...
စစ်တပ်လိုလားသည့်အဖွဲ့၏ ဆွေးနွေးပွဲ၌ မူဆလင်ဆန့်ကျင်ရေး အမေရိကန်လှုပ်ရှားသူတစ်ဦး ပါဝင်
မြတ်ကျော်သူ တပ်မတော်နှင့် ဆက်နွယ်နေသည့် အုပ်စုတစ်ခုက ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကို ကျင်းပခဲ့ရာ မူဆလင်ဆန့်ကျင်...
ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရ နှင့် အဲလဲဗင်း မီဒီယာအကြားဖြစ်ပေါ်နေသည့် အမှုကိစ္စပြေလည်ရန် အောင်သွယ်လိုအပ်ဟု ဦးရောဘတ်စန်းအောင် ပြော
ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရ နှင့် အဲလဲဗင်း မီဒီယာမှ သတင်းသမား သုံးဦးအကြားဖြစ်ပေါ်နေသည့် အမှုကိစ္စများ ပြေလည်စေရန် အတွက် အောင်သွယ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ...
Your Reliable Knowledge Partner ! Myanmar news, headlines, top stories , culture and entertainment.
Home Article Business China Deep Sea Port Kyauk Phyu Myanmar ကျောက်ဖြူ စီမံကိန်း နှင့် ပါတ်သက်ပြီး အစိုးရ အဖွဲ့အတွင်း သဘောကွဲလွဲမှုများ ရှိလာနေ
Article Business China Deep Sea Port Kyauk Phyu Myanmar
ကျောက်ဖြူ စီမံကိန်း နှင့် ပါတ်သက်ပြီး အစိုးရ အဖွဲ့အတွင်း သဘောကွဲလွဲမှုများ ရှိလာနေ
Thura Soe July 04, 2018 0
မြန်မာ အနေဖြင့် တရုတ်၏ ရခိုင် ပြည်နယ်အတွင်း ပရိုဂျက်များ အပေါ် တတ်နိူင်သမျှ ကုန်ကျစရိတ် နဲနဲ နှင့် ပြုလုပ်ရမှာ ဖြစ်တယ်လို့ စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီး အသစ် ဦးစိုးဝင်းက Nikkei Asian Review နဲ့ သီးသန့် တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခန်း မှာ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
အလွန်အကျွံ ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းသည် တခါတရံတွင် မကောင်းသည်ကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အိမ်နီချင်းများမှ လေ့လာသိရှိ ခဲ့ပြီး ဖြစ်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
ကျောက်ဖြူရှိ ရေနက်ဆိပ်ကမ်း နဲ့ အထူးစီးပွားရေး ဇုံများ တည်ဆောက်ရေးသည် ဒေါ်လာ ၁၀ ဘီလျံ နီးပါး ကုန်ကျ မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် တရုတ်ပြည်ထံမှ ငွေချေးငှားရမယ့် အရေး အပေါ် စိုးရိမ်မှုတွေ တိုးပွားလာနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ စီမံကိန်းသည် တရုတ် သမ္မတ စီရှင်ပင့်ရဲ့ Belt and Road စီမံကိန်းကြီးအတွက် အဓိက နေရာ က ပါဝင်လာနေပါတယ်။
အဆိုပါ စီမံကိန်း လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို တရုတ် အစိုးရ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ကုမ္ပဏီ Citic Group မှ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ ရာထူးမှ ဆင်းမပေးရခင် ၂၀၁၅ မှာ ရရှိသွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျောက်ဖြူ ဆိပ်ကမ်းသည် မြန်မာနိူင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံး ဆိပ်ကမ်း တခု ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ပြီး ကုန်တင်သင်္ဘော အကြီးစားများ ကို ကိုင်တွယ်နိူင်မှာ ဖြစ်တဲ့ အပြင် အနီးတွင်လည်း ဧက ၂၅၀၀ ခန့်ကျယ်ဝန်းတဲ့ အထူး စီးပွားရေး ဇုံကြီးလည်း တည်ဆောက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော်လည်း အကြွေးမဆပ်နိူင်၍ တရုတ် လက် နှစ် ၉၉ နှစ်ကြာ လုပ်ပိုင်ခွင့် နဲ့ မနှစ်ကမှ ထိုးအပ်လိုက်ရတဲ့ သီရိလင်္ကာ အဖြစ်ကြောင့် မြန်မာက စိုးရိမ်မကင်း
အကြွေး မဆပ်နိူင် ဖြစ်လာမှာကို စိုးရိမ်နေရတဲ့ အဓိက အကြောင်း ကတော့ ၀င်ငွေ ရရှိ နိူင်မလား ဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောက်ဖြူသည် ရန်ကုန်မှ အလှမ်းဝေးကွာလွန်းလှတဲ့ အတွက် ကုန်စည် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ကြောင့် တောင်းဆို ၀ယ်လိုအား တွေ တိုးတက်လာမှာ မဟုတ်နိူင်ဖူး ဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအတွက် ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ မလိူအပ်တဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ကို တတ်နိူင်သမျှ နည်းအောင် ဖြတ်တောက်ပြစ်ရပါမယ်။ ဒါမှလည်း ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ အကြွေးကို ပြန်ဆပ်နိူင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် လို့ သတိပေးသွားပါတယ်။
ဘယ်လောက်အထိ ကုန်ကျစရ်ိတ်ကို လျော့ချ ဖြတ်တောက်နိူင်မလဲဆိုတာ ဆွေးနွေးနေတဲ့ ရလာဒ်အပေါ် မူတည်နေပါတယ်လို့ ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ မိမိတို့ အနေနဲ့ Clean cut လို့ ခေါ်တဲ့ ဒီလောက်ပမာဏ လျော့ချရမယ်လို့တော့ မရှိဖူးလို့လည်း ဆိုပါတယ်။
တရုတ်အနေနဲ့လည်း ကျိုးကြောင်း ဆီလျော်စွာ နဲ့ နှစ်ဖက် အကျိုးရှိရာ ရှိကြောင်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မယ်လို့ ထင်မြင်ကြောင်းလည်း ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ကော်မရှင် ဥက္ကဌ နဲ့ နိူင်ငံတော် လုံခြုံရေး အကြံပေး ဦးသောင်းထွန်းကတော့ ဝေဖန်သူတွေ ပြောနေတဲ့ သီရိလင်္ကာ ဆိပ်ကမ်း ကိစ္စ ကို သိထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့သော်လည်း ကျောက်ဖြူ ပရိုဂျက်သည် တိုင်းပြည်အတွက် နိူင်ငံရေးအရရော၊ စီးပွားရေးအရပါ အရေးပါနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ထို့အပြင် သီရိလင်္ကာ ရဲ့ အကြွေးပြဿနာသည် ပြောသလောက် မဆိုးလှဟုလည်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင် မိမိတို့ အနေနဲ့ ဒီပရိုဂျက် အမြန် စ တာကို မြင်လိုတယ်လို့ လည်း ဟောင်ကောင် သတင်းစာ နဲ့ တွေ့ဆုံခန်းမှာ ပြောခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၇ အထိ မြန်မာရဲ့ ပြည်ပကြွေးမြီက အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၉.၆ ဘီလီယံ ရှိနေပြီး ဒီအထဲက ၄၀% ဖြစ်တဲ့ ၃.၈ ဘီလီယံ က တရုတ်ကို ပေးဆပ်စရာ ရှိနေပါတယ်။
ဦးစိုးဝင်းက နိူင်ငံတနိူင်ငံ တည်းကို ဒီလောက် ပမာဏ တင်နေခြင်းအပေါ် မိမိအနေဖြင့် ကောင်းသည့် အချက် ဟု မမြင်ကြောင်းလည်း ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
အစိုးရ အနေနဲ့ သဘောကွဲလွဲမှု ရှိနေတာက မည်သို့ မည်ပုံ ချည်းကပ်ပြီး လုပ်ဆောင်သွားရမလဲဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစီမံကိန်း ကြီးက အရင်အစိုးရမှ မစဉ်းစား မဆင်ခြင်ပဲ ချုပ်ဆိုသွားခဲ့ပြီးသား ဖြစ်နေလို့ ဖျက်သိမ်းလို့တော့ မဖြစ်နိူင်တော့ပါဖူး၊ NLD အစိုးရ အနေနဲ့လည်း ယခင် အစိုးရရဲ့ တရုတ် အရှုပ်တော်ပုံ နဲ့ စစ်တပ်ရဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း လက်လွန်ခြေလွန် လုပ်ရပ်တွေကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ နိူင်ငံတကာ အကြပ်အတည်းကြီးကို ရင်ဆိုင်နေရပြီ ဖြစ်ပါတော့တယ်။
Credit : U Hla Soewai Facebook
Tags: Article Business China Deep Sea Port Kyauk Phyu Myanmar
News Myanmar Political LocalNews Article Featured Opinion Regional Business Life Crime WorldNews Daw Aung San Suu Kyi TechNews latestnews Technology Local China Rakhine Military Dollar Lifestyle Interview Celebrity Local News Entertainment Human Right Kyats NLD Peace Headlines International USA Bingalee Yangon Facebook Knowledge Mobile NCA Senior General Min Aung Hlaing UN Trade War Bangladesh Football Internet Money 8888 Apple Bank Cyber Crime Education General General Aung San Government Health History ICC MoU Movies Sport Tamataw VAR Technology iPhone 4G ARSA Bangali Buddhist Cyber Dam Eleven Media Group Exchange Rate Hospital Media Myint Sone RAPE Religion Samsung Satire Singapore Thailand UNHCR War AA Apple Store Ban Biography Bridge Burma Deep Sea Port Economic Electronic Environment Ethnic GDP Hack Huawei Kyauk Phyu Oil Ooredoo OoredooMyanmar Oppo Others PM Phyo Min Thein Pin Lone Religious Report Rohingya TTC Train U Ko Ko Gyi US UWSA Water Worker World Economic Forum Yanghee lee Youth bengali reuters 4G Pro ANP ASRA Air Crash Alpine Cup Apps Asian Aung San Aung San Movie Aung Yin BBC Beauty Billion Bogyoke Boss Brain Britain Broadband Budget Budget Year Buthitaung CMEC Car Chance Child China Town City Mart Civil War Condo Crash Currency Cyber Law Cyber War DICA Daw Nyo Nyo Thin Democracy Dinda Hauw Drugs E-Cigarette EINSTEIN EITI EU Electric Car Elon Musk Entrepreneur F-16 Fixed Broadband Flim Font Foreign Fortune Galaxy J8 Game Generation Genius Gold Hainan Historical Park IBEC IIFFMM IQ India Indonesia Information JMC Jakarta Japan KBZ KBZ Bank KIA KSD-V1 KSD-V2 Kayar Kayin Learn Lottery Lu Lu Aung MMID MODERN TOKYO TIMES MRTV MTSH MaBaTha Malaysia Mandalay Mar MaungTaw Mayar Medical MegaCity Melia Hotel Memories Microsoft Min Aung Hlaing Moe Aung Yin Monk Motivation Movie Muse Myanmar Idol Mytel NCA-S EAO NDF Party NHK Nationa Nay Chi Oo Newspaper Nyi Bwar Nyi Odds Official Online Online Store Ookla Party Police Population Pork President Press Price Project Pure Water Quota R2P RCSS RecentNews Reform Refugee Region Relationship Release Reuers Routers SEZ Safe Zone Satellite Saudi School Bus Sex Shan State Sky Star SmartWatch Space X Speech Speedtest Store TNLA Tab A Tab S4 Teacher Tech Theory Thin Zar Win Kyaw Trump Turkey Twitter U Aung San Oo U Ko Ni U Than Shwe UNDP UPDJC USDP Unicode VAR Video Vivo Vmware WAB WFP WY Wa Wai Lu Kyaw Weather Web Portal Winner Women World Bank Xiaomi YBS YCDC YRTA Youtube Yuan Zawgyi e-government eSport iOS suzuki cup 2018 tax
Your Reliable Knowledge Partner ! Myanmar news & headlines, top stories , culture and entertainment.
Eureka Myanmar | Myanmar news, headlines, top stories , culture and entertainment. © 2015-2018. All Rights Reserved.
Designed Edit By: Thura Soe